Fadhiga suuli dahab ka samaysan oo la xaday iyo qiimaha uu taagnaa - ARAABINEWS.COM | ARAABINEWS.COM
Fadhiga Musqul dahab Ka samaysan oo uu farsameeyay nin farshaxaniiste ah oo u dhashay Talyaaniga oo ki rakibnaa guri uu ku dhashay raiisal wasaare hore oo Ingiriiska ka talin jirey xilligii dagaalkii labaad oo lagu magacaabi jire Jeerjil ayaa la xaday.
Jeerjil oo ka baqaya Jarmalka ayaa markasta raadsan jirey xulafo intuuna daadku soo gelin. Fadhigan musqusha ayaa lacag ahaan joogta 1 milyan iyo dheeraad doolara waxana gurigan lagu rakibey 2 cisho kahor.
Dhaxal sugaha isagu ka masuulka ahaa fadhigan musqusha dahabka ah ayaa bilo kahor sheegay inaan qorshaha ugu jirin in uu keeno ilaalo maadaama fadhigan musqusha ku xiran tahay biyaha qasriga oo ay adag tahay in lala baxo.
Waxa Fadhi musquleedkan markii la sameeyay sanadii 2016 la dhigey masxaf ku yaala New York waxana isticmaalay 100, 000 (boqol kun) oo qof, waxana laga sameeyay lacag aad u badan.
Farshaxaniistaha Talyaaniga ayaa isagu halku dheg ka dhigtey haddii aad cunto raashin 200 oo doolar jooga iyo hadaad cunto mid 2 doolar jooga in xilliga musqusha aad tagto ay isku mid yihiin.
Taas oo uu ula jeeday dadka Yurub ku nool oo qaarkood lacagtu ka badatey oo moodey in lacagtu askeysi dheeri ah keento. Tuugada xaday fadhigan musqusha oo xarfaan ahaa ayaa hawsha ka maydhay 4:50 subaxnimo.
Booliiska Ingiriiska ayaa sheegay inay qabteen oday 66 jira oo qasriga joogey xilliga la xaday inkastoo waxba lagu hayn haddana ay bilaabeen daawashada kaamaradaha ku xiran qasriga bal inay ifafaalo ka helaan cida xaday.